Tiradda dadka abaaraha Kasoo barakacay ee Muqdisho soo gaaray oo sii kordheysa. – idalenews.com
Tiradda dadka abaaraha Kasoo barakacay ee Muqdisho soo gaaray oo sii kordheysa.
Muqdisho(INO)- Gobolka Banaadir ayaa ka mid ah meelaha ay soo gaarayaan dadka abaaraha ka soo barakacay gaar ahaa dagmadda Kaxda.
Gudoomiyah dagmadda Kaxda Maxamed Ismaaciil ayaa sheegay inay ilaa hada dadka abaaraha ka soo barakacay ee soo gaaray xerooyin loogu talagalay oo dagmadaasi laga hergaliyay ay ku dhowyihiin ilaa 7,000 oo qoys.
‘’ abaarta ka jirta gobolada dalka waa mid aad u xanuun badan dagmada kaxda dadka soo gaaray markii hore tirsigoodii u dambeyay qoysaskaa asbuucyo ka hor waxa ay ahaayeen 5,000 in ka badan hadane waxa ay ku dhowyihiin ilaa 7,000 barakacayaasha abaaraha ka imaanaya waa kuwa xowli ku socdo ayuu yiri Gudoomiye Kaxda.
Gudoomiye Maxamed Ismaaciil ayaa intaa ku daray in dadka abaaraha ka soo barakacay ay heystaan dhibaatooyin nololeed oo aad u daran waxaana uu sheegay in iyaga oo kaashanaya maamulka gobolka Banaadir ay sameeyeen meela cunta loogu kariyo.
‘’ waxaan sameynay meelo dadka soo barakacay cunto loogu kariyo oo aan ka hirgalinay dagmadda Kaxda innaga oo kaashanayna maamulka gobolka Banaadir, waxaan kale oo aan qaarkood u qeybinay raashiin dadaalada maamulka gobolka uu wado waa mid aad u sareeya waxaana loo baahan yahay in gurmadka la kordhiyo’’
Magaalada Muqdisho ayaa waxa ka socda dadaalo loogu gurmanayo dadka abaaraha ka soo barakacay waxaa wada maamulka gobolka Banaadir, maamulada dagmooyinka iyo qeybaha bulshadda haba u badnaadaane ardayda waxka barata jamaacadaha iyo iskuulada iyo culimada.
Britain oo 110 million Pound uga qayb-qaadanaysa gurmadka dadka ay abaaruhu ku dhufteen ee Somalia